निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन को कहाँ व्यस्त ? – Halkaro
निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन को कहाँ व्यस्त ?
काठमाडौँ । दलहरूले प्रचारप्रचार गर्ने आज (सोमबार) अन्तिम दिन हो । राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै छ । यस अवधिमा उम्मेदवार र दलहरूले कुनै पनि माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । एसएमएस, भाइबर वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि मत माग्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले २१ मंसिरमा हुने दोस्रो चरणको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लगभग सबै तयारी पूरा गरेको छ । मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत पठाउने, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नेलगायत काम अन्तिम चरणमा रहेको आयोगले जनाएको छ । सोमबार मतदान अधिकृत मतदानस्थल पुगेर नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन सुरु गर्नेछन् ।
सुरक्षा प्रबन्ध मिलाऊँ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएको बताए । ‘सुरक्षाको प्रबन्ध, व्यवस्थापन र रणनीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने । आचारसंहिता उल्लंघनका घटना अनुगमन गर्न आयोगले १ सय १३ सहसचिव र ८८ उपसचिवलाई परिचालन गरेको छ ।
मतदाता शिक्षामा १९ हजार कार्यकर्ता परिचालन
आयोगका अनुसार हजार मतदाताबराबर एकजना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवी कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि करिब १९ हजार स्वयंसेवी कार्यकर्ता परिचालन गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कार्टर सेन्टर, जाइका, इयूलगायत निकायका करिब चार सय पर्यवेक्षकलाई स्वीकृत दिएको छ । राष्ट्रिय पर्यवेक्षकमा भने ५२ वटा संस्थाका ४५ हजारलाई अनुमति दिएको छ ।
कांग्रेसका शीर्ष नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा
प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उम्मेदवार बनेका अधिकांश नेता आफ्नै क्षेत्रमा व्यस्त हुँदै छन् । कांग्रेसले सोमबार डडेल्धुराको अमरगढी, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवा, सुनसरी, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुरको गोदावरीलगायत ठाउँमा ठूला सभा राखेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाणले बताए ।
देउवा गृहजिल्लामा व्यस्त
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा प्रचारको अन्तिम दिन आफ्नै चुनावी क्षेत्र डडेल्धुरामा व्यस्त हुनेछन् । आइतबार कञ्चनपुरका बेलौरी र महेन्द्रनगरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका उनले सोमबार डडेल्धुराको अमरगढीमा हुने सभालाई सम्बोधन गर्दै छन् । त्यसपछि नेता–कार्यकर्तासँगको भेटमै उनको समय बित्नेछ । प्रचारप्रसार गर्न नपाइने १९ र २० मंसिरमा पनि देउवा डडेल्धुरामै रहनेछन् । २१ मंसिरमा भोट हालेपछि उनी काठमाडौं फर्किनेछन् ।
पौडेल पनि आफ्नै क्षेत्रमा
तनहुँ २ बाट उम्मेदवार बनेका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचारको अन्तिम दिन दमौलीमा हुने चुनावी सभामा सहभागी हुँदै छन् । सो सभाका लागि महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. रामशरण महतसहितका नेता पुग्ने पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । सभापछि पौडेलले दमौलीका केही स्थानमा हुने कोणसभालाई सम्बोधन गर्ने र नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाटको समय राखेको छन् ।
महामन्त्री नवलपरासी र तनहुँमा व्यस्त
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला तनहुँको दमौलीमा हुने चुनावी सभा र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमै व्यस्त हुनेछन् ।
संयुक्त अपिलको तयारी
वाम गठबन्धनका तर्फबाट मतदातालाई गठबन्धनलाई आह्वान गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त अपिल निकाल्ने तयारी गरेका छन् । दुवै अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर अपिलमार्फत मतदातालाई आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको प्रवक्ता रिमालले बताए ।
आयोगको ‘इलेक्सन क्विज’प्रति एमालेको आपत्ति
निर्वाचन आयोगले विभिन्न १० टिभी स्टेसनबाट प्रसारित गर्ने गरी सञ्चालित मतदाता शिक्षाअन्तर्गतको ‘इलेक्सन क्विज’ कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै एमालेले त्यस्तो प्रचार तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले अभिनेता राजेश हमालद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त क्विजमा निर्वाचन आयोगले कांगे्रसका उम्मेदवारको प्रचार गर्ने नियतसहित ‘तीन २ उम्मेदवार कहाँबाट उठेका छन्’ भन्ने प्रश्न राखेर कांग्रेसको एकपक्षीय प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ । आयोगकै संलग्नतामा त्यस्तो प्रचार भए सम्बन्धित निर्वाचन आयुक्तलाई कारबाही गर्नसमेत एमालेको माग छ ।
‘हाम्रो पार्टी सत्ताधारी दलको खास उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष भनिएको निर्वाचन आयोगले कुन–कुन उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न खाजेको हो, स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दछ,’ एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि त्यो प्रचार सामग्री निर्वाचन आयोगको जानकारीबेगर भएको हो र मतदाता शिक्षाको जिम्मा लिने आयुक्तको निजी निर्णयमा भएको हो भने आयोगलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न र निज आयुक्तलाई तत्काल कारबाहीका लागि माग गर्दछ ।’
माओवादी घरदैलो र चुनावी प्रशिक्षणमा
प्रचारको अन्तिम दिन माओवादी नेता ठूला आमसभा र कोणसभा कम गर्दै छन् । मतदाताकेन्द्रित अभियानलाई उनीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार बिहान एमाले र माओवादी युवाले गर्ने मार्चपासमा सहभागी हुँदै छन् । उनले दिउँसो एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र रहेको टाँडीमा हुने आमसभालाई सम्बोधन गर्ने छन् । त्यसपछि नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट र प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन् । निर्वाचन नहुदासम्म प्रचण्ड चितवनमै बस्ने छन् ।
कृष्णबहादुर महरा आफू उम्मेदवार रहेको दाङ क्षेत्र नम्बर २ मै ब्यवस्त हुनेछन् । विहान घोराही उपहानगरपालिकाको १४ र १५ वडामा घर दैलो तथा भेटघाट कार्यक्रम राखिएको छ । दिउँसो खाना खाएपछि एमाले–माओवादीलगायत बामगठबन्धनका नेता÷कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नेछन् ।
नेता टोपबहादुर रायमाझी उम्मेदवार रहेको अर्घाखाँचीमा एक आमसभा र दुई कोण सभा राखिएको छ । मालारानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा विहान आमसभा छ । मालारानीकै वडा ४ र ५ मा कोणसभाको छ ।
ललितपुर ३ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेकी पम्फा भुसाल सोमबार धापाखेलको कोण सभा आयोजनामा सहभागी हुने छिन् । कार्यकर्ता र मतदातासँग भेटघाट गर्ने उनको योजना छ ।
← विकास निमार्णको पहिलो हिस्सेदारःकांँग्रेस
शरदकुमार गौचन हत्याका योजनाकार पक्राउ, के थियो कारण ? →